Hiran State - News: HS:- Gudiga qaban qaabada doorashada madaxtinimada Soomaaliya oo shaaciyey..
HS:- Gudiga qaban qaabada doorashada madaxtinimada Soomaaliya oo shaaciyey..
HS:-Guddiga qaban qabada doorashada MadaxtinimadaSoomaaliya dhawaana uu ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka Madoobe Nuunoow Maxamed ayaa maanta waxa ay shaaciyeen in ay bilaabatay qabashada araajida musharixiinta xilka madaxtinimada dalka.
Kulan ay maanta magaalada Muqdisho ay isugu yimaadeen guddiga Doorashada ee baarlamanka Soomaaliya ayaa waxay si rasmi ah u shaaciyeen in laga bilaabo maanta oo ah 7 April ilaa 21 April ay socon doonto qabashada araajida mushaxaraxiinta isu soo sharaxaya xilka madaxtinimo ee madaxweynaha Jamhuuiriyada federalka Soomaaliya.
Xoghayaha guddiga doorashada Ismaaciil Axmed Nuur oo saxaafadda la hadlay ayaa xusay iney billaabatay qabashada araajida musharrixiinta, islamarkaana ay soconayso ilaa 21 bishan aynu ku jirno ee April kadibna waxaa la guda galidoonaa buuyiri in 30ka bisha la doorto hogaamiyahii Soomaaliya ee dalka la wareegi lahaa 20ka bisha 8aad ee sanadkan.
Xoghaya guddiga doorasahada ayaa sidoo kale tilmaamay in laga bilaabo 22-bishan ilaa-25-ka bishan aynu ku jirno guddigu ay isla eegayaan araajida musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimo ee dalka,Xoghayaha gudiga mudane Ismaaciil Axmed Nuur ayaa waxa uu carabaabay in 30-ka bishan ay dhacayso doorashada madaxtinimada dalka islamarkaana lagu qaban doono xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho oo ay hada ka socdaan kulamo joogto ah.
Sharuudaha laga doonayo musharaxiinta waxaa ka mid ah.
"Shuruudaha murashaxa laga doonayo waa inuu yahay muwaadin Soomaali ah, muslim ah, 40-jir uusan ka yaraan, inuu caafimaad qabo oo aan horay dambi culus u gelin, inuu leeyahay qof akhlaaq wanaagsan, inuu leeyahay karti aqoon iyo waayo-aragnimo uu ku gudan karo waajibaadka madaxweynimo, inuu soo gudbiyo codsi, gal iyo laba sawir, isla markaana uu bixiyo lacagta diiwaangelinta oo ah 2,000 oo doollar,"
Marka laga soo tago ku dhawaaqida ay maanta ku dhawaaqeen gudiga qaban qabada doorashada madaxtinimada Soomaaliya hadane waxaa lagu soo waramayaa inuu durbaba uu musharaxii ugu horeeyey ee araajidiisa geysta uu noqday musharaxa Maslax Mahamed Siyaad oo gudiga doorashada u gacan galiyey araajidiisa maalintii shaleyto aheyd.halka musharaxiin uu ka mid yahay Professor Warfaa lagu soo waramayo ineyba ku sii jeedaan maalmaha inagu soo aadan dalka Soomaaliya.
Doorashada soo socota ee lagu wado iney ka dhacdo caasimada Soomaaliya bishani aynu ku jirno aaqirkeeda ayaa waxaa u tartamaya musharaxiin badan oo ku kala nool dal iyo dibad.hadii doorashadani sidii la rabay u dhacdo waxey ka dhigan tahay in aan dalka Soomaaliya laga taagi doonin calanka Qaramada Midoobay wadankuna waxuu noqon doonaan mid ka bad baada gumeysi cusub.
La soco wararkeena danbe iyo heerka ay mareyso qaban qaabada doorashada
· admin on April 07 2012 12:24:40 · 0 Comments · 2037 Reads ·
14,579,557 unique visits